ဘယ်သူ့ကလေးလဲ။ - Webtoon Korean Manhwa - Manhua - Manga နှင့် Light Novel Online တို့ကိုအခမဲ့ဖတ်ပါ
ဘယ်သူ့ကလေးလဲ။ ပျမ်းမျှ4/5ထဲက 109
N / A, 225.5K အမြင်များရှိသည်
ပြဇါတ်, ဒရာမာ, စိတ်ကူးစိတ်ကမ်း, Shounen Ai, ဝက်ခြံ
ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်မွေးဖွားခဲ့သည်ဟုသူမကပြောပြသည်။ သူမသည်မည်သူကိုလှည့်စားရန်ကြိုးစားနေသနည်း။ ငါ့သားသည်အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ရန်အိပ်မက်များကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်ထို့နောက်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောစီအီးအိုသည်ဘုရားသခင်သိသည့်နေရာမှထွက်လာပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်၏ဘဏ္littleာတော်၏ဖခင်ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ! ဒါက TV ဒရာမာဆိုတာဘာလဲ။
အခန်းကြီး 176 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 175 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 174 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 173 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 172 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 171 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်း 169 - ပြင်ဆင်ပါ။ ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်း 168 - ပြင်ဆင်ပါ။ ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်း 167 - ပြင်ဆင်ပါ။ ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်း 166 - ပြင်ဆင်ပါ။ ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 164 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 163 နိုဝင်ဘာလ 11, 2021
အခန်းကြီး 162 နိုဝင်ဘာလ 11, 2021
အခန်းကြီး 161 နိုဝင်ဘာလ 11, 2021
အခန်းကြီး 160 အောက်တိုဘာလ 23, 2021
အခန်းကြီး 159 အောက်တိုဘာလ 16, 2021
အခန်းကြီး 158 အောက်တိုဘာလ 16, 2021
အခန်းကြီး 157 စက်တင်ဘာလ 9, 2021
အခန်းကြီး 156 စက်တင်ဘာလ 9, 2021
အခန်းကြီး 155 သြဂုတ်လ 14, 2021
အခန်းကြီး 154 သြဂုတ်လ 14, 2021
အခန်းကြီး 153 သြဂုတ်လ 14, 2021
အခန်းကြီး 152 သြဂုတ်လ 14, 2021
အခန်းကြီး 151 သြဂုတ်လ 14, 2021
အခန်းကြီး 150 သြဂုတ်လ 14, 2021
အခန်းကြီး 149.5 အောက်တိုဘာလ 6, 2021
အခန်းကြီး 149 သြဂုတ်လ 14, 2021
အခန်းကြီး 148.6 အောက်တိုဘာလ 6, 2021
အခန်းကြီး 148.5 အောက်တိုဘာလ 6, 2021
အခန်းကြီး 148 သြဂုတ်လ 15, 2021
အခန်းကြီး 147.5 အောက်တိုဘာလ 6, 2021
အခန်းကြီး 147 သြဂုတ်လ 17, 2021
အခန်းကြီး 146 ဇူလိုင်လ 2, 2021
အခန်းကြီး 145 ဇူလိုင်လ 2, 2021
အခန်းကြီး 144 ဇြန္လ 24, 2021
အခန်းကြီး 143 ဇြန္လ 24, 2021
အခန်းကြီး 142 ဇြန္လ 5, 2021
အခန်းကြီး 141 ဇြန္လ 5, 2021
အခန်းကြီး 140 ဇြန္လ 5, 2021
အခန်းကြီး 139 ဇြန္လ 5, 2021
အခန်း 138 ဧပြီလ 30, 2021
အခန်း 137 ဧပြီလ 27, 2021
အခန်း 136 ဧပြီလ 27, 2021
အခန်းကြီး 135 ဧပြီလ 9, 2021
အခန်းကြီး 134 ဧပြီလ 2, 2021
အခန်းကြီး 133 မတ်လ 27, 2021
အခန်းကြီး 132 မတ်လ 13, 2021
အခန်းကြီး 131 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021
အခန်းကြီး 130 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2021
အခန်းကြီး 129 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2021
အခန်းကြီး 128 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2021
အခန်းကြီး 127 ဇန်နဝါရီလ 29, 2021
အခန်းကြီး 126 ဇန်နဝါရီလ 29, 2021
အခန်းကြီး 125 ဇန်နဝါရီလ 29, 2021
အခန်းကြီး 124 ဇန်နဝါရီလ 29, 2021
အခန်းကြီး 123 ဇန်နဝါရီလ 29, 2021
အခန်းကြီး 122.5 ဇန်နဝါရီလ 29, 2021
အခန်းကြီး 122 ဇန်နဝါရီလ 29, 2021
အခန်းကြီး 121 ဇန်နဝါရီလ 29, 2021
အခန်းကြီး 120 ဇန်နဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 119 ဇန်နဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 118 ဇန်နဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 117 ဇန်နဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 116 ဇန်နဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 115 ဇန်နဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 114 ဇန်နဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 113 ဇန်နဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 112 ဇန်နဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 111 ဇန်နဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 110 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020
အခန်းကြီး 109 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020
အခန်းကြီး 108 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020
အခန်းကြီး 107 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020
အခန်းကြီး 106 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020
အခန်းကြီး 105 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020
အခန်းကြီး 104 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020
အခန်းကြီး 103 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020
အခန်းကြီး 102 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020
အခန်းကြီး 101.2 အောက်တိုဘာလ 6, 2021
အခန်းကြီး 101.1 အောက်တိုဘာလ 6, 2021
အခန်းကြီး 101 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020
အခန်း 100 ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2020
အခန်း 99 ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2020
အခန်း 98 ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2020
အခန်း 97 ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2020
အခန်းကြီး 96 ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2020
အခန်းကြီး 95 ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2020
အခန်းကြီး 94 ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2020
အခန်းကြီး 93 ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2020
အခန်းကြီး 92 ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2020
အခန်းကြီး 91 ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2020
အခန်းကြီး 90 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2, 2020
အခန်းကြီး 89 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2, 2020
အခန်းကြီး 88 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2, 2020
အခန်းကြီး 87 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2, 2020
အခန်းကြီး 86 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2, 2020
အခန်းကြီး 84 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2, 2020
အခန်း 83 နိုဝင်ဘာလ 19, 2020
အခန်း 82 နိုဝင်ဘာလ 19, 2020
အခန်း 81 နိုဝင်ဘာလ 19, 2020
အခန်းကြီး 80 နိုဝင်ဘာလ 19, 2020
အခန်းကြီး 79 နိုဝင်ဘာလ 19, 2020
အခန်းကြီး 78 နိုဝင်ဘာလ 19, 2020
အခန်း 77 နိုဝင်ဘာလ 6, 2020
အခန်း 76 နိုဝင်ဘာလ 6, 2020
အခန်း 75 နိုဝင်ဘာလ 6, 2020
အခန်း 74 နိုဝင်ဘာလ 6, 2020
အခန်း 73 အောက်တိုဘာလ 26, 2020
အခန်း 72 အောက်တိုဘာလ 26, 2020
အခန်း 71 အောက်တိုဘာလ 26, 2020
အခန်း 70 အောက်တိုဘာလ 26, 2020
အခန်း 69 အောက်တိုဘာလ 26, 2020
အခန်း 68 အောက်တိုဘာလ 26, 2020
အခန်း 67 အောက်တိုဘာလ 26, 2020
အခန်း 66 အောက်တိုဘာလ 26, 2020
အခန်း 65 အောက်တိုဘာလ 26, 2020
အခန်း 64 အောက်တိုဘာလ 26, 2020
အခန်း 63 အောက်တိုဘာလ 26, 2020
အခန်းကြီး 62 အောက်တိုဘာလ 24, 2020
အခန်းကြီး 61 အောက်တိုဘာလ 24, 2020
အခန်းကြီး 60 အောက်တိုဘာလ 24, 2020
အခန်းကြီး 59 အောက်တိုဘာလ 24, 2020
အခန်းကြီး 58 အောက်တိုဘာလ 13, 2020
အခန်းကြီး 57 အောက်တိုဘာလ 13, 2020
အခန်းကြီး 56 အောက်တိုဘာလ 13, 2020
အခန်းကြီး 55 အောက်တိုဘာလ 13, 2020
အခန်းကြီး 54 အောက်တိုဘာလ 13, 2020
အခန်းကြီး 53 အောက်တိုဘာလ 13, 2020
အခန်းကြီး 52 အောက်တိုဘာလ 13, 2020
အခန်းကြီး 51 အောက်တိုဘာလ 13, 2020
အခန်းကြီး 50 အောက်တိုဘာလ 13, 2020
အခန်းကြီး 49 အောက်တိုဘာလ 13, 2020
အခန်းကြီး 48 အောက်တိုဘာလ 13, 2020
အခန်းကြီး 47 အောက်တိုဘာလ 13, 2020
အခန်း 46 အောက်တိုဘာလ 13, 2020
အခန်း 45 အောက်တိုဘာလ 13, 2020
အခန်း 44 အောက်တိုဘာလ 2, 2020
အခန်း 43 အောက်တိုဘာလ 2, 2020
အခန်း 42 စက်တင်ဘာလ 29, 2020
အခန်း 41 စက်တင်ဘာလ 29, 2020
အခန်း 40 စက်တင်ဘာလ 29, 2020
အခန်း 39 စက်တင်ဘာလ 29, 2020
အခန်း 38 စက်တင်ဘာလ 29, 2020
အခန်း 37 စက်တင်ဘာလ 29, 2020
အခန်း 36 စက်တင်ဘာလ 29, 2020
အခန်း 35 စက်တင်ဘာလ 29, 2020
အခန်း 34 စက်တင်ဘာလ 29, 2020
အခန်း 33 စက်တင်ဘာလ 29, 2020
အခန်း 32 စက်တင်ဘာလ 29, 2020
အခန်းကြီး 31 စက်တင်ဘာလ 22, 2020
အခန်းကြီး 28 စက်တင်ဘာလ 22, 2020
အခန်းကြီး 27 စက်တင်ဘာလ 22, 2020
အခန်းကြီး 26 စက်တင်ဘာလ 22, 2020
အခန်းကြီး 25 စက်တင်ဘာလ 22, 2020
အခန်းကြီး 24 စက်တင်ဘာလ 22, 2020
အခန်းကြီး 23 စက်တင်ဘာလ 22, 2020
အခန်းကြီး 22 စက်တင်ဘာလ 22, 2020
အခန်းကြီး 21 စက်တင်ဘာလ 22, 2020
အခန်း 20 စက်တင်ဘာလ 22, 2020
အခန်း 19 စက်တင်ဘာလ 22, 2020
အခန်း 18 စက်တင်ဘာလ 10, 2020
အခန်း ၂၁-၂၂ စက်တင်ဘာလ 10, 2020
အခန်း ၁၉ - ၂၀ စက်တင်ဘာလ 22, 2020
အခန်းကြီး 16 သြဂုတ်လ 14, 2021
အခန်း 15 ဇူလိုင်လ 17, 2020
အခန်း 14 ဇူလိုင်လ 17, 2020
အခန်း 13 ဇူလိုင်လ 17, 2020
အခန်း 12 ဇူလိုင်လ 17, 2020
အခန်း 11 ဇူလိုင်လ 13, 2020
အခန်း 10 ဇူလိုင်လ 13, 2020
အခန်း9ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်း 8 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်း7ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်း6ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်း5ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်း4ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်း3ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်း2ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 1.2 ဇြန္လ 27, 2020
အခန်းကြီး 1.1 ဇြန္လ 27, 2020
အခန်း 1 ဇူလိုင်လ 5, 2020
Shinde kudasai! Yuusha desho လား?
ဇန်နဝါရီလ 11, 2022